Sidee Baa Lagu Kasban Karaa Saaxiibbo Badan? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud Sidee Baa Lagu Kasban Karaa Saaxiibbo Badan?
Sidee Baa Lagu Kasban Karaa Saaxiibbo Badan?
Waa kuma saaxiibkaa? Ma kan sheekaalowga ah baa oo ay dadku u yaqaannaan hebal waa sheekaalow, mise waa kan qosolka badan oo ay dadku u yaqaannaan hebal waa qoslaaye.
Saaxiib waa shakhsiga kugu dhaw marka la eego dadka aad is taqaannaan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa shakhsiga aad leedihiin xiriir joogto ah, aadna iska wareysataan mar kasta hadba wixii idinku soo kordha.Saaxiib waa kan marka aad xanuunsan tahay ku soo booqda, kuna caawiya haddii aad u baahan tahay. Waa midka marka uu sheekeynayo aan been kuugu sheekeyn, sidoo kale waa midka kuugu hambalyeeya marka aad guul gaarto ama aad horumar sameyso.
Dhinaca kale, saaxiib waa kan kula qaybsada murugada ku soo wajahda, isla markaana kula taliya, mar kastana kheyr kuu rajeeya. Sidoo kale, saaxiibkaa waa kan talo wanaagsan kaa siiya dhinaca waxbarashada, shaqada iyo dhinac kasta oo aad u baahan tahay in lagaala taliyo. Haddaba sidee ayaad u kasban kartaa saaxiibbo badan?
Uma baahna cilmi iyo aqoon gaar ah ee waa wax adiga kugu xiran iyo sida aad ula dhaqanto bulshada aad la nooshahay.Sheegidda runta marka aad sheekeyneyso waxaad ku kasban kartaa asxaab badan. Isku day oo noqo mid ku sheekeeya runta. Taasi marka aad sameyso waxay dadka adiga ku yaqaanno ku dhiirigalineysaa in ay kugu kalsoonaadaan oo ay xiriir dhow oo saaxiibtinimo kula yeeshaan.
Caawi bulshada aad la nooshahay ama aad is taqaannaan marka ay kaa codsadaan ama adiga qudhaada aad dareento in ay caawinaad u baahan yihiin. Ilaali ballanta waqtigeeda oo ha noqon mid ka dib dhaca. Guddoonsii bulshada aad taqaanno intii karaankaada ah haddiyado nooca ay doonaan ha noqdaane.Tusaale ahaan, haddii aad safar dibadda ah u baxdo marka aad soo noqonayso soo qaad haddiyado kala duwan intii suurtagal ah si aad u guddoonsiiso asxaabtaada waliba iyaga oo aan kaa warqabin.
Ku qaabbil waji furfurnaan bulshada aad is taqaannaan marka aad la sheekeyneyso iyo marka aad la kulmeyso intaba. Taasina waxay kuu suurtagelinaysaa in aad asxaab badan kasbato. U sheeg bulshada aad taqaanno oo ku waani wax kasta oo wanaag ah, walibana kula dardaaran wax kasta oo fiican. Ku hadal hadal fasiix ah oo la fahmi karo marka aad asxaabtaada la sheekeyneyso. Gacan furnaanta iyo sooryeynta iyaduna waxay qayb ka qaadataa in aad asxaab badan kasbato,waa tuu abwaan yiri;
lagu baadi soocaa
dadna weedha sugan iyo
lagu kala sifeeyaa
iyo soorya bixinta.
Dhageysiga ra’yiga dadka marka ay hadlayaan waxay iyaduna qayb ka qaadataa in aad asxaab badan kasbato.Tusaale, haddii aad adiga iyo asxaabtaada ka wada qayb galeysaan dood waa in aad dhageysataa fikirka asxaabtaada xitaa haddii aadan ku qanacsaneyn. Isticmaal marka aad rabto in aad naqdiso fikirka saaxiibkaa ‘anigu fikirkaaga mid ka duwan ayaan qabaa’. Kula dhaqan bulshada iyo asxaabtaada intaba dabeecad wanaagsan.
La jeclow asxaabtaada wixii adiga aad naftaada la jeceshahay. Kaftanka cilmiyeysan oo aad asxaabtaada la wadaagto wuxuu qayb ka yahay in aad asxaab badan kasbato. Ogow Rasuulkeenna Muxamed (CSW) wuxuu ahaa mid kaftama, laakiin wuxuu ahaa mid ku kaftama xaqa. Ogow oo mar kasta xusuusnow qodobbadan talada ah ee kor ku xusan si aad u kasbato saaxiibbo badan.
W.D: C/waaxid Xuseen Macallin (Arbac)
Previous articleDowlad-xumida Soomaaliya iyo Sida Looga Bixi Karo
Next articleKaalinta Dhallinyarada Soomaalida ee Dhismaha Dalka